AZALEA: TARANTA GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Siyaabaha ay ku koraan azaleas guriga: koritaanka rhododendron
Ubax ee qof weyn ee yaralea waa farxadda iyo sharafta beerta wax kasta oo awood u leh inuu koro oo ka tago noocan oo kale ah, laakiin warshad aad u fiican.
Sidee ayuu azalea u dhalataa?
Isku dhufashada azaleas ee guriga ayaa badanaa dhaca. siyaabo badan: Iyadoo caawimaadda abuurka, jarida, gooyo iyo kala qaybinta duurka (sida caadiga ah, warshad gaboobay oo leh tiro badan oo caleemo ah ayaa loo isticmaalaa). Aynu sii degganaan doono labada kowaad.
Koraaya miraha azalea at home
Nafaqada abuurka rhododendron - habka uu waaya aragnimada beeralayda u isticmaalaan si aan caadi ahayn, maadaama ay ku filan tahay shaqeyn iyo ma aha mid waxtar leh.
Abuuridda abuurka Gagaashaa oo keliya marka la abuuro iyaga xaaladahasida:
joogitaanka joogtada ah qoraxdaa (sidaa darteed, azalea waxaa ugu wanaagsan laga bilaabo abuurka inta u dhaxaysa Maajo iyo Agoosto, haddii aan lagu beerin xaaladaha aqalka dhirta lagu nadiifiyo iftiinka macmalka);
abuurista "saameyn koronto ah";
helitaanka ciidamo gaar ah;
qoyaan joogto ah
Nidaamka abuurista azaleas ee isticmaalaya abuurka ayaa loo tixgelin karaa talaabo talaabo tallaabo ah:
1 talaabo. Dhalmada oo dhoobo ballaaran ama dhagaxyada webiyada. Waxaad iyaga nadiifin kartaa foornada 15-20 daqiiqo heerkulka waxoogaa ka sarreeya 100 digrii, ama qashinka isla markaa biyo karkaraya.
2 talaabo. Diyaarinta dheriga. Dhoobo ballaaran ama dhagaxyo yar oo dhexroor yar ayaa lagu dhajiyay meesha hoose ee dheriga, taas oo miraha lagu beeray lakabka 2-3 cm. Ka dib marka dhagaxyada la dhigo hoosta, ciid nadiif ah ayaa lagu shubay sare, ka dibna - dhulka.
Caarilka for abuurka azalea waa ka wanaagsan inaad doorato mid gaar ah.
3 talaabo. Beeraha beerta. Seeds waxay u baahan yihiin in lagu kala firdhiyo dusha qoyan ee ciidda qoyan oo dabool leh filim dhir leh. Huuri ciidda waa inay noqotaa maalin kasta, laakiin ma ahayn waraabin, iyo adigoo ku buufinaya dhalo buufin, ka saarista filimka iyo daboolida miraha mar kale. Ka qaad faashadda polietene waxay noqon kartaa ka dib markii miraha ay bilaabaan inay Gagaashaan.
Xitaa haddii shuruudaha qolka oo ah meeshii laga helayo ubaxkan quruxda badan ee la qorsheeyey ay udhow yihiin meel ku haboon, tani ma damaanad qaadayso in miraha ay qaadaan xidid.
Xitaa haddii aan laga iibsan dukaanka, laakiin laga soo qaaday "tijaabin" gacmaha, laga bilaabo geedka quruxda leh, ma aha mid macnaheedu yahay in ubaxa sii kori doono si la mid ah sida "deeq bixiyaha" ee ay miraha.
Kordhinta azalea ee guriga
Faafinta dhadhanka leh gooynta waa habka marka ugu dambeyntii lagu ogaado sida ugu badan. Guntinta dhirta waa in ay horeba u xoogan yihiin for transplanting, laakiin aan lignified. Da'da ugu wanaagsan ee gooyn ah waa marka laga bilaabo 5 ilaa 7 bilood.
Waxaa ugu fiican shuruudaha lagaga jari karo azaleas:
heerkulka hawada oo joogto ah 24-27 digrii;
qoyaanka hawada 80-85%;
carrada acidic (ku haboon ciidda ku habboon, laga bilaabo geedaha caleenta ama peat).
Geedi socodka taranka azaleas wuxuu marayaa dhowr marxaladood:
1 talaabo. Doorashada of gooyn. Waxaa lagama maarmaan ah in la doorto qoyaan ku filan oo ku filan, oo ka soo jeeda warshadda ugu weyn oo leh jeexjeex indhaha hoostiisa hoose ka yar, ka saar burooyinkeeda ka goynta iyo ka tag 3-4 caleemo xagga sare.
Dhimashada ugu wanaagsan ee jarista 6-7 cm.
2 talaabo. Diyaarinta jarida. Ka hor inta beerto, waxaad ku daaweyn kartaa xaydhka azalea oo leh xal aan saliid lahayn oo ah kaneecada ama korriin koritaanka. Haddii guntooda loo qorsheeyay in aan la beeray isla markiiba ka dib jarida, ka dibna waa in loo sameeyaa xirmooyinka iyo hoos u dhigo xal of heteroauxin on qaybta hoose. 7-8 saacadood.
3 talaabo. Diyaargaroobidda goob degel. Hadday tahay dherer, sanduuq ama aqalka dhirta yaryar, mabda'a diyaarinta waa isku mid: dhagaxyada la nadiifiyey ayaa la dhigayaa dhinaca hoose iyo dhulkuna kor ku yaal. Ka hor inta aan la beeriin asalka biyo fiican.
4 talaabo. "Fadhiga" ku jar dhulka. Si loo damaanad qaado hal ama laba gooyn ayaa xididada laga qaaday, waa la beeray 3-4 koob oo hal koob ah, ama tiro badan, haddii gooynta Gagaashu waxay ku jiri doontaa sanduuqa. Gooyn lagu beeray waa in ay ahaato ciid ballaaran oo la waraabiyo oo fog. 4-5 cm oo kala duwanilaa qoto dheer 2-2.5 cm.
5 talaabo. Abuuritaanka xaaladaha koritaanka. Gooynta waxaa lagu daboolay weel daboolan ama lagu rakibay galaaska galaaska. Ugu horreyntii, azalea waa in lagu daboolaa maro madoow ah oo qorraxda qorraxda lagu daboolaa si ay u qaadato, ka fogaansho toos ah. Wakhtiga lagu kharash gareeyo nabarrada ayaa si tartiib ah u kordhaya ilaa goynta qaado xididka. Ka dibna geedka waxaa had iyo jeer lagu hayaa qol qoryo leh. Waqti ka waqti, ciidda waa in la qoyaan leh sprayer iyo hawada maalin walba gooynta.
Dabcan, haddii aad tahay kaliya ninkii beerta ka shaqeynayey, xayawaanka azalea wuxuu keenayaa dhibaatooyin, laakiin waa inaadan ka fogaanin quruxda sida azalea. Samee dadaal yar, waxaadna arki doontaa sida gurigaagu u bedeli doono ubax ee duurka yarale ee hore!
Sawirrada koritaanka ubaxa yaralea waxaa lagu soo bandhigay hoos:
New Zealand jilitaanka cad cad ee bakaylaha: sida loo daryeelo iyo sida loo quudiyo
Dhul-beereedka Tansaaniya ayaa koraaya culeyska bambaanooyinka
Maxaa la sameeyaa haddii turkiga peck midba midka kale
Geedka tufaaxa ee dusha sare leh "Pavlusha"
Subtleties sorrel bacriminta. Maxay tahay iyo sida loo quudiyo guga, dayrta iyo kadib goynta?
Qaar badan oo ku lug leh beerta ayaa si joogta ah isku dayaya in ay helaan dhammaan noocyada siyaabo badan oo lagu kordhinayo soo saarista alaabta koray iyo fududeeyeen geeddi-socodka beerashada iyo koritaanka miraha. Xaaladdan oo kale, beeritaanka yaanyada - waa wax reeban. Mid ka mid ah natiijooyinka asalka ah ee degaankaan wuxuu ahaa koraayada yaanyada baaldiyada caadiga ah. Read More
Neoregelia: sharaxaadda dhirta gudaha, daryeelka guriga
Waxaan baranaynaa hababka dogwood taranta